Säpo oo miisaaniyadd badan u isticmaasha la dagaalanka argaggixisada - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Säpo oo miisaaniyadd badan u isticmaasha la dagaalanka argaggixisada
La daabacay tisdag 17 februari 2015 kl 12.27
Ciidamada nabadgelyada ayaa miisaaniyadooda ugu badan u isticmaalaya in ay gaashaantaan argaggixisada. Geesta kale waxaa korodhay dadyoowga gabbaadka u ah ciidamada sirdoonka. Sidaa waxaa daaha ka rogay warbixin uu sameeyay wargeyska DN
Sannadkii 2013 ayaa ciidamada nabadsugida Sweden ee magacooda loo soo gaabiyo SÄPO ay boqolkiiba 44 ka mid ah miisaaniyadooda geliyeen difaaca shakhsiyaad gaar ah, halka boqolkiiba 28 ay geliyeen ka hortaga argaggixisada. Shan sanno ka hor ayaa xisaabtu intaas ka duwanayd oo SÄPO boqolkiiba 36 ay gelin jirtay difaaca shakhsiyaadka, halka boqolkiiba 25 ay geli jireen ka hortagga argaggixisada.
Ciidamada nabadsugida Sweden ayaa sannadkii hore isticmaalay lacag dhan 1,1 bilyan oo koroon, sida laga soo xiganayo tirakoob hordhac ah oo ay shaacisay Wakaalada dhaqaaluhu. Middan ayaa korodhay boqolkiiba 3, haddii la barbar dhigo sida kharashku ahaa sannadkii 2013.